Sidee si ay u gudbiyaan Music ka nano iPod in Lugood
> Resource > Lugood > Sidee si ay u gudbiyaan Music ka nano iPod in Lugood
Lumay maktabadda Lugood aad, oo ay ku jiraan 2,000 oo heeso cadaalad-faraxa, ay sabab u tahay shil computer ama reinstallation computer? Waxba ma ahan wixii kiis aad wajahay, haddii aad weli ma xoojiyaa maktabadda Lugood ah, laga yaabo inaad lumiso heesaha oo dhan ku jira. Xitaa haddii aad taageeray iyaga ku saabsan nano iPod, ma aad heeso ka nano iPod bedeli karaa Lugood, u Lugood masixi doono oo dhan oo iyaga ka mid ah marka aad nano iPod syncing.
Haddii aad ku dhibeen waxaa by, nasiib wanaag, waxaad u timaadeen inaad meel sax ah. Halkan waa nano iPod ah in suuqa kala iibsiga Lugood qaylqaylin Wondershare TunesGo ama Wondershare TunesGo (Mac) . Waxa ay si fiican loogu tala galay in aad awood u siinaya in si fudud oo dhaqso uga soo nano iPod wareejiyo music in Lugood. Intaa waxaa dheer, macluumaadka ku saabsan muusiga, sida play soo oogay, ratings qashanka, la dhoofiyo doonaa in Lugood aad isku mar. Iyada oo barnaamijkan, waxa kale oo aad kartaa in aad nuqulka music on nano iPod si aad u computer u gurmad.
Music ka nano iPod dhaqaaq Lugood Si fudud
In qayb hoose, waan sharxi doonaa sida ay u guuraan music on iPod nano maktabadda Lugood. Tallaabooyinka waa iska sahlan. Fadlan soo baxdo iyo rakibi barnaamijkan on your computer.
Tallaabada 1. Daahfurka kala iibsiga iyo xirmaan nano iPod la PC
Waxa ugu horeeya ka dib marka aad soo dajiyo this nano iPod in Lugood qalab kala iibsiga waa in uu u bilaabi by double-riixaya icon ku qoran shaashada PC. Markaas, aad nano iPod ku xiran si aad PC via cable USB ah. Ka dib markii barnaamijkan waxaa lagu ogaadaa, waxaad ka heli doontaa in warbaahinta iyo playlist aad nano iPod waxaa lagu muujiyey qaybta bidix.
Fiiro gaar ah: Fadlan dammaanad in Lugood ayaa lagu rakibay on computer si loo hubiyo in tani nano iPod in Lugood qalab kala iibsiga si sax ah u shaqeeyo.
Tallaabada 2. Nuqul music ka iPod nano in Lugood
In uu furmo suuqa hoose, guji "Copy Music inay Lugood" inay soo qaadaan suuqa kala ah. Guji "Start". Tan iyo dhammaan faylasha warbaahinta ayaa la hubinayaa, idinku waajibka ah inaad uncheck faylasha kale warbaahinta marka aad rabto oo kaliya in aad nuqulka music.Then, guji "nuqul Lugood". Tani nano iPod in Lugood qalab kala iibsiga uu bilaabo inuu si degdeg ah u dhoofiyaan music.
Markaas, inay u dhoofiyaan iPod nano music maktabadda Lugood, waa in aad ku dhufo "Media", tab ee column bidix. Tani waxay kor u soo Bixiyaa suuqa kala warbaahinta dhinaca midig. Riix ah "Music" button. Dooro songs in aad go'aansato in aad wareejiso maktabadda Lugood. Markaas, riix-xagalka rogay yar yar "Dhoofinta in", oo guji "Dhoofinta in Lugood Library". Ama kaliya riix "Smart dhoofinta in Lugood" button. Haddii aad u guurtay songs qaar ka mid ah dib u maktabadda Lugood ka hor, waxa aad lacag la'aan doonaa si joogta ah loogu wareejiyo isla heeso.
Fiiro gaar ah: TunesGo Wondershare ayaa si fiican u la shaqeysaa iPod nano 7, iPod nano 5, iPod nano 6, iPod nano 2, nano iPod, iPod nano 3 iyo iPod nano 4.
Ka sokow songs wareejinta, aad awoodaan in ay playlist ka nano iPod wareejiyo maktabadda Lugood. Guji "playlist" tab on column ka tagay. on Murayaad saxda ah, doortaan playlists aad doonayso ka dibna riix "Dhoofinta in". In liiska hoos-hoos u, guji "Dhoofinta in Lugood Library".
Inta lagu jiro kala iibsiga, aad ku xusuusatid in nano iPod waa in lagu hayaa xidhiidhinaya kombiyuutarka waqtiga oo dhan.
Waa hagaag, waa arrin fudud in la hagaagsan music ka nano iPod in Lugood. Waa maxay sababta aan kala soo bixi barnaamijkan u leedahay in isku day ah?
Sidee si ay u gudbiyaan Photos ka iPad in iPad
Rajeenayo in Top loogu talagalay iPhone ma hagaagsan doonaa la Lugood
Sidee si meesha looga saaro waxyaabaha nuqul ka maktabadda Lugood
Talo & Tricks Dib Loogu Dhiso Lugood Library